Ukasawana Instagram Stories, kana iwe uchida kuvagona, wauya kurudyi nzvimbo. Pave nemakore akati wandei kubvira Instagram yakatanga nyaya yayo yeNhau, iine maturusi akati wandei uye sarudzo dzakawedzerwa nekufamba kwenguva kuti zvikubatsire kuwana hunyanzvi nekutaura kwako nyaya.
Kuti ikubatsire iwe kuve tenzi we Instagram Nhau kunyangwe - kana kudzidza izvo zvekutanga kana iwe uri mutsva kuchinhu - isu takaunganidza epamusoro matipi uye manomano atakawana. Hezvino zvese zvaunoda kuti uzive Instagram Nhau nyanzvi.
Chii chiri Instagram Nyaya?
Snapchat yaive yekutanga social media app kuunza "Nhau" ficha, asi ikozvino pese pese pasocial network inopa ivo, kusanganisira Facebook uye Instagram. Nhau dzinotendera iwe kuti uise mavhidhiyo nemifananidzo uye wozozviparadzira kuvanhu vanokutevera muchimiro chereel rinogara kwemaawa makumi maviri nemana. Mushure menguva iyoyo, ivo vanonyangarika. Iko hakuna muganho kune vangani vaunogovana, uye kune matani enzira ekuzvisanganisa.
Kuti utarise nyaya yemumwe munhu pa Instagram, ingobaya padenderedzwa tsvuku kutenderedza chero mufananidzo mufananidzo weumwe munhu waunoteera kumusoro kwescreen chekumba. Kuti usiye nyaya, ingo shandura pasi. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve Instagram Nyaya, tarisa wedu anotsanangura tungamira apa.
Kana iwe uchida matipi uye manomano, ramba uchiverenga.
Maitiro ekugovana Instagram Nyaya
Kugovera pikicha kana vhidhiyo kune yako nyaya, tevera nhanho idzi:
Tinya iyo "+" icon pakona yepamusoro kuruboshwe uye sarudza Nhau muzasi kurudyi kwescreen yako, kana ingo shandura kuruboshwe kuenda kurudyi kubva chero kupi.
Tinya bhatani rekutora kuti utore pikicha, kana kubaya uye bata kuti utore vhidhiyo.
Neimwe nzira, sarudza pikicha kubva kuraibhurari yefoni yako kana garari nekutepa pane iyo gallery mune yepazasi kona yekona.
Tinya mavara, squiggly mutsetse kana zvitambi icon kuti utore kana kuwedzera zvinyorwa kana chinamira.
Kuti ubvise zvinyorwa kana chinamirwa, dhonza uye udonhedze pane remarara / bhaini icon.
Paunenge wagadzirira kugovera, tinya Yako Nyaya muzasi kuruboshwe kana tinya Tumira ku.
Ongorora: Unogona zvakare kuchengetedza nyaya yako kukamera yako. Paunongotora pikicha kana vhidhiyo, tinya pamuseve unonongedza pasi kumusoro kwescreen kuti uchengetedze. Iwe unogona zvakare kuona yako nyaya uye tinya pakusevha chero nguva kuti uchengetedze "vhidhiyo" (kungo chengeta vhidhiyo) kana "sevha nyaya" (kuchengetedza iyo nyaya yese).
Instagram Nyaya matipi uye manomano
Heano mamwe matipi makuru uye manomano ekukubatsira kugona Instagram Nhau. Kune zvekare mamwe matipi ekutanga pano kubatsira vanotanga kusvika pakubata nawo.
Maitiro ekuwedzera Instagram Nhau Dzakasimudza
Iwe unogona kusarudza nyaya dzekuchengetedza pane yako nhoroondo iyo inogona kutariswa yakareba kupfuura maawa makumi maviri nemana. Izvi zvinobatsira kana iwe uine kukwidziridzwa kana chimwe chinhu chakakosha iwe chaunoda kuti vanhu vakwanise kuona. Kugovera "kuratidza" ita shuwa kuti une iyo Instagram Nyaya Archive ficha yakavhurwa.
Kuti uite izvi: Vhura Instagram> Tinya pamitsara mitatu kumusoro kurudyi> Kuvanzika> Nhau> Toggle pane 'Sevha Nhau kudura'.
Mushure meizvozvo zvadzimwa, dzokera kuprofile yako uye pazasi peiyo bio, tinya iyo "+ Nyowani" kuti uwedzere imwe Nongedzo. Iwe unogona kusarudza kubva pane zvakachengetwa uye mhenyu nyaya kuwedzera kune ako akajekeswa nyaya. Mushure meizvozvo, ivo vanozoonekwa pane yako mbiri.
Maitiro ekutaura mumwe munhu mune yako Instagram Nyaya
Paunenge uchigovana pikicha kana vhidhiyo kune yako nyaya, unogona kutaura mumwe munhu. Paunongotora pikicha kana vhidhiyo, tinya mavara mavara, wobva wonyora "@" uchiteverwa nekukasira nezita remunhu raunoda kutaura, uye sarudza chimiro chemunhu kubva kumifananidzo yedenderedzwa inoonekwa pazasi. Pane sarudzo yekuchinja kugona kwevanhu vaunotaura kuti vawedzere nyaya yako kunyaya yavo, asi unofanirwa kuibvisa usati wasarudza chimiro chemunhu.
Paunotaura mumwe munhu munyaya yako, zita ravo rekushandisa richaonekwa mune yako nyaya uine mutsetse. Chero ani anogona kuona nyaya yako anogona kuitepa kuti aende kuchimiro chake.
Vanhu vaunotaura vanozowana Push ziviso ichivaudza kuti wataura nezvavo mune yako nyaya. Vachawanawo DM kubva kwauri inosanganisira kufanoona yenyaya yako uye nekuvapa sarudzo yekukurumidza kuiwedzera kune yavo nyaya, kana usati wabvisa mukana wekugovana. Iwe unogona kutaura kusvika kuvanhu gumi mumufananidzo wega wega.
Maitiro ekugovana Instagram zvinyorwa kune nyaya
Iwe unogona kugovera iyo Instagram posvo kune yako nyaya nekudzvanya museve / share bhatani pazasi peiyo positi iwe yaunoda kuwedzera, wobva wabaya pane iyo 'Wedzera Post kuNhau Yako' sarudzo.
Ramba uchifunga kuti kana iwe uchigovana posvo yemumwe munhu kune yako nyaya, chero munhu anoiona anogona kuona kuti ndiani akatanga kuitumira uye anogona kuona iyo yekutanga account. Kana iwe wakamakwa mune yemumwe nyaya, iwe unowana iyo DM ine imwecheteyo sarudzo yekudzoreredza iyo nyaya kwemaawa makumi maviri nemana anotevera.
Maitiro ekuwedzera kutaurwa kune yako wega Instram Nhau
Kana mumwe munhu akataura nezvako mune yavo Instagram nyaya, iwe uchave nesarudzo yekuitumira zvakare, uchiwedzera iyo pikicha kana vhidhiyo kune yako wega nyaya, sezvatakambotaura kare patinotaura nezvekuti ungataure sei mumwe munhu mune yako wega nyaya.
Iwe unozowana chiziviso kuburikidza neDM kuti iwe wakataurwa nezvayo chinongedzo ku "Wedzera Izvi kuNhau Yako". Simply tinya pane iyi link uye iyo nyaya inozoratidzwa mukutarisa uko kwaunogona kugadziridzwa. Kana yawedzerwa, vateveri vachaona zita rekushandisa rekutanga, uye vanogona kuribata kuti vaone chimiro chavo.
Maitiro ekubata akawanda mafoto panguva imwechete uye wedzera kune yako Instagram Nyaya
Izvo zvinokwanisika kutora akati wandei mafoto panguva imwechete uye wobva wawedzera iwo kune yako Instagram Nhau mune kamwe kurova.
Rova zvakasimba kurudyi kuti uvhure Instagram Nhau> Sarudza iyo Multi-Capture icon mubhawa kuruboshwe rwechidzitiro chako (denderedzwa nemadhiza akaitenderedza)> Tora mifananidzo yako> Dhinda Unotevera pazasi pechiso> Tinya pane yega pikicha kuti uwedzere zvitambi. , mameseji kana maGIFS nezvimwe> Vimba Next kana wapedza kugadzirisa> Tapira Goverana.
Maitiro ekuwedzera Boomerang yako Instagram Nyaya
Iwe unogona kana kuwedzera iyo Boomerang (ichisunungura pfupi vhidhiyo) iwe yawakatogadzira kune yako Instagram Nyaya nekusarudza iyo kubva kune yako gallery. Kana iwe unogona kugadzira Boomerang zvakananga kubva kuiyo Instagram app.
Rova zvakasimba kurudyi kuti uvhure Instagram Nhau> Tinya pane iyo Boomerang icon mubhawa kuruboshwe kwechiratidziro chako (mufananidzo we8 padivi)> Dhinda uye ubatise bhatani rekutora pazasi pechiso chako kuti utore yako Boomerang> Wedzera zvitambi kana zvinyorwa uchishandisa mifananidzo iri pamusoro kana wapedza> Dzvanya "Tumira ku" pasi kurudyi kuti uitumire kuNhau yako.
Maitiro ekuwedzera akawanda mifananidzo kune yako Instagram Nyaya
Kana iwe uchida kuwedzera akati wandei akasiyana emifananidzo kune yako Instagram Nyaya asi uine imwe chete posvo, iwe unogona kushandisa iyo Layout chishandiso.
Rova zvakasimba kurudyi kuti uvhure Instagram Nhau> Tinya pane Ratidziro icon mubhawa kuruboshwe rwechidzitiro chako> Sarudza Chinja Grid kuti uchinje dhizaini kuti ikwane mifananidzo yako (matanhatu sarudzo)> Sarudza chikamu cheiyo grid iwe yaunoda kuwedzera yako chekutanga pikicha ku> Tora iyo "+" mukona yepasi kuruboshwe pane yako gallery> Sarudza pikicha yaunoda kuwedzera> Dzokorora chikamu chimwe nechimwe cheiyo grid, uchisarudza chikamu cheiyo grid kutanga wobva wawedzera iyo pikicha.
Paunenge wapedza, tinya chishambwe pakati. Unogona kuita edits (stikha, zvinyorwa nezvimwe) wosarudza "Tumira ku" kutumira kuNhau yako.
Maitiro ekuwana iwo mwero pikicha yekuwedzera kune yako Instagram Nyaya
Pane chishandiso cheMatanho muiyo Instagram Nyaya yekushandisa iyo ichakubatsira iwe kutora mapikicha akatwasuka nekuisa gridhi uye nhanho pachiratidziro che skrini kuti ikubatsire kumisikidza chidzidzo chako usati watora pikicha.
Svetera kurudyi ot kuvhura Instagram Nhau> Tinya pane iyo Level icon mubhawa kuruboshwe rwechidzitiro chako (tenderera netambo yakatwasuka)> Tungamidza musoro wako kumusoro> Vimba pane iyo bhatani bhatani> Govera kune yako Nhau.
Mashandisiro aungaita Superzoom mhedzisiro
Iyo Superzoom chishandiso inozoisa mukati nekubuda pane imwe nyaya uye kune hwakawanda mhedzisiro iwe yaunogona kuisa mukati mayo, seMoyo, Moto, Bummer, TV Chirongwa, Inoshamisa, nezvimwewo Zvakakodzera kuvapa vese kuenda kunoona zvinokodzera mhedzisiro yauri kuedza kuwana.
Rova zvakasimba kurudyi kuti uvhure Instagram Nhau> Dzvanya pamuseve mubhawa kuruboshwe kwescreen yako> Dzvanya iyo Superzoom icon (denderedzwa rakasimba nematenderedzwa maviri akaikomberedza)> Sarudza maitiro aunoda pamusoro pebhatani rekutora> Dhinda uye bata bata bhatani kana kudzvanya kamwe chete zvichienderana nemhedzisiro yaunoda> Wedzera chero chinyorwa kana zvitambi uchishandisa iwo ma icon ari pamusoro pechiratidzo chako chekutarisa> Govera kuNyaya yako kana wapedza.
Mashandisiro ekuita iyo Photobooth mhedzisiro
Iyo Photobooth chishandiso inokutendera iwe kuti ugadzire Photobooth-dhizaini reel nekutora mifananidzo mina mukuteedzana. Pane yekuverengera timer yemasekondi matatu ekutanga kubatwa, mushure mezvo iwe unowana wechipiri kutamisa foni yako mukati meimwe neimwe inotevera pikicha.
Rova zvakasimba kurudyi kuti uvhure Instagram Nhau> Dzvanya pamuseve mubhawa kuruboshwe kwescreen yako> Dzvanya pane iyo Photobooth icon (makadhi ane '+' chiratidzo kumusoro kumusoro)> Dzvanya iyo yekubata icon pazasi> Tanga yako Photobooth > Gadzirisa yako Photobooth ine zvitambi uye zvinyorwa kana iwe uchida> Goverana kuNyaya yako.
Maitiro ekuwedzera poll kune yako Instagram Nyaya
Iwe unogona kuwedzera poll kune yako Instagram nyaya. Iyo template yekuvhotera inokutendera iwe kubvunza iwo mubvunzo uye nekushandura mhinduro kune chero chaunoda, kana iwe unogona kunyorera pane dhayi kumusoro kwePoll Template skrini kuti uwane imwe pre-yakavakwa kurudziro iwe yaunogona zvakare wozogadzirisa.
Rova zvakasimba kurudyi kuti uvhure Instagram Nhau> Dzvanya pane 'Aa' icon pane kuruboshwe kwescreen yako> Slide kuruboshwe kurudyi pane zvidhori zvidhori pasi pechiso chako kusvika iwe wasvika payi yebhuruu / green pie icon> Tinya 'Bvunza mubvunzo' uye mapokisi emabhokisi ega ega kugadzirisa> Dzvanya 'Kuitwa' kumusoro kurudyi kana uchigadzira> Tapira 'Tumira ku' muzasi kurudyi kuti ugovane nyaya yako.
Iwe unogona zvakare kubaya pamadhadha kumusoro kuti uone akasiyana maPoll mienzaniso nema emoji semhinduro, senge 'Ndinofanira kutanga blog' nemabhokisi ekupindura sechigunwe kumusoro kana chigunwe pasi. Sezvakaita chidzitiro chemubvunzo, tinya pane chimwe nechimwe chikamu kuti uchinje pane zvaunoda uye tora 'Waita' kumusoro kurudyi uye 'Tumira ku' pasi kurudyi kana wapedza.
Sezvo vanhu vachisarudza chero sarudzo, iyo sarudzo ichagadzirisa huwandu hwayo uye iwe unogona kubva wagovana mhedzisiro kumagumo.
Maitiro ekuwedzera ndangariro kune yako Instagram Nyaya
Kufanana neFacebook, Instagram ine yakachengetwa yezviyeuchidzo, iyo iwe yaunogona kuwana zviri nyore uye kutumira kune yako Instagram Nyaya.
Rova zvakasimba kurudyi kuti uvhure Instagram Nhau> Dzvanya pane iyo 'Aa' icon kuruboshwe kwescreen yako> Slide kuruboshwe kurudyi pane zvidhori zvidhori pazasi pechiso chako kusvika iwe wasvika kune wachi ine museve icon. Iwe unogona ipapo tinya pane ndangariro inoita senge ichadzvanya kuburikidza, kana tinya pane "Ona Zvese" kumusoro kwechiso.
Kana iwe uchida kuchinja iyo yekumashure ruvara, tinya pane rakatenderedzwa denderedzwa muzasi kurudyi kwescreen yako kusvika iwe wawana kumashure kwaunoda.
Paunenge wafunga pane ndangariro iwe yaunoda kutumira - uye neshure - tora pane wachi ine museve icon pasi zvakare. Izvi zvinobva zvakuendesa kuchiratidzo chekutarisa kwaunogona kuwedzera zvimwe zvimiti kana kutaura mumwe munhu, kana kudzvanya 'Tumira ku' pazasi kuti uzviise.
Maitiro ekuwedzera yekuverengera timer pane Instagram Nhau
Instagram ine yekuverengera timer sarudzo nemazuva, maawa uye maminetsi, ayo iwe aunogona kuwedzera uye kugadzirisa kune yako Nhau. Ichapa sarudzo dzakasarudzika - se "Iyo Svondo" asi iwe unogona kuchinja izvi kune chero chauri kuverenga pasi.
Rova zvakasimba kurudyi kuti uvhure Instagram Nhau> Tinya pane 'Aa' icon pane kuruboshwe kwechiratidziri> Slide kuruboshwe kurudyi pane dzeraundi mifananidzo pazasi pechiso chako kusvikira iwe wasvika kune iyo timer timer. Unogona kubaya pamadhayeti kumusoro kuti uone akasiyana sarudzo dzakatemwa uye wobva wadzvanya chero pane iyo timer kuti uigadzirise. Iwe unofanirwa kusarudza Zuva Rekupedzisira uye zvimwe zvese zvinobva zvaitika.
Paunenge wapedza, tinya pane yei timer icon pazasi pechiratidziro chako wobva wadzvanya pane "Tumira ku" pasi kurudyi.
Maitiro ekubvunza vateveri vako mubvunzo pane Instagram Nyaya
Instagram inopa zvimwe zvishandiso zvekutora zvekubva kune vanhu vanoona yako nyaya. Unogona kuvaita kuti vakubvunze mubvunzo, tanga sarudzo (sezvataurwa pamusoro apa), vaone maakaundi ekutevera kana akatorwa ezuva, kana kutamba mitambo yekufungidzira senge zvauri kutarisa kana zvauri kuteerera, pakati pevamwe .
Kutanga nekutsvaira kurudyi kuvhura Instagram Nhau uye nekukanda pane 'Aa' icon kuruboshwe kuruboshwe rweyako skrini. Iwe unogona ipapo kupururudza kuburikidza neyakatenderera mifananidzo.
Iyo icon imwe ine munhu mubhutu rekutaura inokutendera iwe kuti utaure mumwe munhu ane preset Happy Birthday, Anni Anniversary kana Thanks.
Kuti utambe mitambo yekufungidzira, yekumhanyisa dhizaini dhizaini kana zano maakaundi ekutevera kana akatorwa ezuva, iwe unoda iyo icon ine mana akasiyana-saizi orenji nzvimbo. Kubaya pane 'Ona Zvese' kumusoro kwescreen yako kunokupa iwe akasiyana presets.
Kuti uwane vateveri kuti vakubvunze iwe mubvunzo, tinya pane yakatenderera icon ine yepepuru / yebhuruu nzvimbo uye nemubvunzo chiratidzo mukati. Kune zvakare yakawanda sarudzo yemubvunzo preset inova denderedzwa icon ine sarudzo dzeorenji nechikwekwe kana kuyambuka mukati.
Gadzira kumashure kwakasimba kana pombi kuratidza
Kugadzira yakatsvuka mavara kumashure pane yako pikicha kana vhidhiyo kana kugadzira izvo zvinowanzonzi pombi kuratidza: Sarudza mufananidzo waunoda kuratidza> Dhinda mutsetse wekukwiridzira kumusoro kurudyi kwechiratidzo chepenzura> Sarudza rako kara chero kubva pane zvingasarudzwa pazasi kana nekukanda pane yakasarudzika sarudza chishandiso uye kusarudza vara kubva pamufananidzo> Dhinda uye ubatisise pamufananidzo wako kana vhidhiyo nemunwe wako kwemasekondi mashoma kusvikira vara rivhara mufananidzo wako.
Iwe unogona zvakare kushandisa irabha kumusoro kwescreen yako kuti ubvise chikamu cheyakasimba kumashure uye ubudise zvimwe zvemufananidzo wako wepakutanga.
Gadzira yakasarudzika kumashure
Unoda kuona-kuburikidza nemaruva kumashure? Dhinda mutsara we squiggle kumusoro kurudyi kwemidziyo yepenzura> Sarudza chishandiso chekupaka pakati pesarudzo shanu kumusoro kwechiratidziro chako> Sarudza iyo yekumashure kwemavara iwe yaunoda pazasi pechiratidziro chako kana sarudza vara uchishandisa iyo ruvara picket> Dhinda uye batisisa pamufananidzo wako kana vhidhiyo nemunwe wako kwemasekondi mashoma. Izvi zvinogadzira kugadzira opaque skrini kuti iwe ugone kuona zvirimo zvauri kugovana.
Gadzira pombi yekurongedza Nhau
Stacey Solomon's Tap paTidy Instagram Nhau dzakanaka - uye zviri nyore kugadzira, asi iwe unofanirwa kunyatso rongedza mumba. Nehurombo, Instagram haikuitire izvozvo.
Tora mufananidzo weiyo yakasviba kamuri> Gadzirira iyo> Tora mumwe mufananidzo wekamuri kubva kukona imwechete kana yagadziriswa> Rova ruoko kurudyi kuti uvhure Instagram Nhau> Wedzera mufananidzo wekutanga kubva kugalari yako mukona yezasi yekuruboshwe> Tinya chinamirwa icon. pamusoro pechiso chako> Kutsvaga kweTap kuTidy> Sarudza iyo Tepa kuTidy chinamirwa chaunoda> Isa iyo nyaya> Wedzera mufananidzo wechipiri wakarongedzwa uye woisa iyo nyaya futi.
Shandisa yakazara yakazara chati
Kuti usarudze chero ruvara mune chati yemavara: Dzvanya pane squiggle mutsetse icon kumusoro kwechiratidziro chako> Dhinda uye bata pane chero ruvara pazasi pechiratidziro chako kuti uwane iyo kara chati. Ndizvo! Unogona kusarudza chero ruvara rwaunoda. Usakanganwa iwe unogona zvakare kushandura saizi yebhurashi kuruboshwe.
Sarudza mavara kubva kumifananidzo
Iwe unogona zvakare kushandisa mavara kubva kumifananidzo yako, sezvatakataura muchidimbu mumatipi ari pamusoro. Kuti usarudze ruvara kubva pamufananidzo: Dzvanya squiggly mutsetse kumusoro kwescreen yako> Sarudza chishandiso chevaravara kuruboshwe kuruboshwe rwezvisarudzo zvemavara pazasi pechiso chako> Bata chero kupi pamufananidzo waunoda kusarudza iwo muvara. kubva. Ndizvozvo, zvaitwa.
Chinja saizi font
Unogona kushandura saizi yefonti yechinyorwa chako nenzira mbiri: Kutanga, nyora, uye kuruboshwe, iwe uchaona inotsvedza kuwedzera kana kudzikisa font. Neimwe nzira, kana uchinge wapedza kutaipa, tora zvawakanyora uye shandisa zvigunwe zviviri kuti uwedzere. Iwe unogona kuita izvi nematikiki, futi.
Rongedza zvinyorwa zvako
Kutanga, wedzera chinyorwa kune yako zvemukati uye shongedza zvakajairwa. Wobva wadzvanya museve we "Sevha" mukona yekona uye tinya iyo "Yako Nyaya" icon kuti uiwedzere kune yako nyaya. Tevere, sarudza iyo pikicha yawakachengeta kubva kune yako kamera roll yekuwedzera kune yako nyaya. Wedzera - kana rukoko - wechipiri chinyorwa pamusoro pekutanga, uye dzokorora kudzamara wasvika pane chako chaunoda. Iwe uri kunyatso chengeta ako mapikicha uye kuasazve-iwo iwo iwo ekumisikidza ako macaption.
Sunga iwo macaption ekwere
Kana iwe uchirwara neiyo square-kona kumashure pane ako macaption, edza kushandisa penzura chishandiso kudhirowa chimiro chakasiyana, kungave madenderedzwa, ovals, moyo, uye wozoisa chinyorwa pamusoro pechimiro chako chitsva. Ita shuwa yekusarudza iyo caption isina chero kumashure (ingori zvinyorwa).
Shandisa mafonti akasiyana uye saizi pamwechete
Naizvozvi, iwe unofanirwa kuwedzera tsamba yega yega kana izwi senge munhu chinyorwa uye wozviisa. Nyora izwi rekutanga kana tsamba, wobva wasarudza iyo vara, wozvvuzvurudza munzvimbo. Wedzera imwe tsanangudzo mune rakasiyana ruvara, riwedzere saizi, uye dhonza iyo kwaungade. Dzokorora nekusingaperi. Usakanganwa kuti iwe unogona zvakare kuchinja iyo font pachezvayo! Aenda mazuva ekuva nesarudzo imwe chete yefonti. Kune mapfumbamwe aunosarudza kubva, kusanganisira neon, tapureta, chazvino, uye chakasimba.
Ona dzimwe sarudzo dzekunamira
Paunenge uchinge wasarudza chinamirwa (sikweya kiyamu ine nyemwerero kumeso pamusoro pechiso chako) kuwedzera kune yako Instagram Nyaya, unogona kuibata kuti uone dzimwe sarudzo. Nekudaro, semuenzaniso, mukombe wekofi unogona kushanduka kuita mukombe wetii kana mubato wemukombe unogona kutenderera neimwe nzira.
Nyora zvimiti zvako
Ehe, iwe unogona zvakare "pini" ako ekunamatira. Kana iwe uchida kuti zvitambi zvionekwe muzvikamu zvevhidhiyo, tinya uye ubatisise kuti uzviise pese paunoda. Semuenzaniso, iwe unogona kupinza museve padanda padyo nemumwe munhu kuti uvanongedze mukati mechikamu chese chikamu.
Chinja kumeso kwako kuita chinamirwa
Tinya iyo stickers icon kumusoro kwechiso. Tevere, tinya iyo icon yekamera parutivi rwechipiri mutsara unobuda kumusoro kubva pasi. Chiso chako chichaonekwa pakati pekona. Kana iwe ukabaya kumeso kwako, chena denderedzwa muganho uchaonekwa wakakomberedza chitambi. Tinya zvakare kuti utore chena sqaure muganho uye zvakare kuti uende usina muganho. Gadzira kumeso uye wobva wadzvanya denderedzwa jena pasi pechiso chako kuti utore pikicha. Ipapo, saizi uye chinamira chinamirwa.
MaGIF inzira inonakidza yekuwedzera yekunakidzwa kune chero nyaya. Iwe unogona kana kugadzira nyaya neGIF chete, kana iwe unogona kuwedzera GIF kumufananidzo kana vhidhiyo.
Kugadzira nyaya uine GIF chete: Rova zvakasimba uchibva chero kupi pa Instagram uye tora pane "Aa" icon kuruboshwe> Rova zvakasimba kurudyi kuruboshwe pane dzeraundi mifananidzo pazasi pechiso chako kusvikira wasvika kuGIF> Tsvaga iyo GIF yakakwana.
Kuwedzera GIF kumufananidzo kana vhidhiyo: Svetera kurudyi kubva chero kupi pa Instagram> Wedzera mufananidzo kana vhidhiyo> Tinya pane chinamirwa icon kumusoro kana yako iratidziro (mativi ane nyemwerero kumeso)> Shandisa yekutsvaga bar kumusoro uye sarudza GIF kubva pane dzakasiyana sarudzo dzinozoonekwa, kana tsvaga iyo chaiyo GIF nekutepa iyo GIF icon muchikamu chechipiri uye tsvaga yako yakakwana GIF.
Chinja mavara ezuva revhiki
Iwe unoziva chinamirwa icho chinotaurira zuva revhiki? Zvakanaka, waiziva here kuti kana ukabatirira chinamira icho uchigadzirisa, chinoshandura ruvara? Hongu. Ichokwadi! Kuti uwane chinamirwa che "zuva revhiki", tinya chinamira uye unosarudza icho kubva mutray. Wobva wadzvanya zvakare kuti uchinje ruvara.
Wedzera mimhanzi kunyaya yako
Wedzera mimhanzi kunyaya yako nekuiridza iyo pafoni yako iwe uchinyora vhidhiyo. Neimwe nzira, iwe unogona kubata kuti uwedzere chinamirwa iwe uchiona pikicha kana vhidhiyo pane yako nyaya. Tsvaga "Music" mubhawa rekutsvaga uye tora pane chinamirwa che "Music" kumusoro. Iwe unobva waona ipapo runyorwa rurefu rwemimhanzi inozivikanwa, asi iwe unogona zvakare kutsvaga nekugadzirisa nemamoods uye mhando.
Shandisa chechitatu-bato maapplication kune mamwe mhedzisiro
Iwe unogona zvakare kushandisa maapps seVideoshop kana VideoLap zvakare wedzera mimhanzi kune yako nyaya. Muchokwadi, kune akati wandei maapplication anogona kusimudza yako Instagram mutambo nekukutendera iwe kuwedzera inofamba mameseji, kutora mhenyu vhidhiyo, rekodhi yako skrini, uye zvimwe. Izvo zvakakodzera kubhurawuza kutenderedza yako app chitoro.
Embed Spotify zvinongedzo mu Instagram nyaya
Iwe unogona zvakare kugovana Spotify zvinongedzo izvo zvinobvumidza vateveri kudzvanya vakananga kuburikidza - zviri nyore
Enda usina maoko
Wakaneta nekubata bhatani rekutora pasi iwe uchitaura nyaya yako? Kuruboshwe rweyako Instagram Nyaya skrini, pane bhaa remifananidzo. Ukabaya museve kuti uwedzere bhari, iwe uchaona icon isina Maoko pazasi. Tinya izvo kuti uende usina maoko. Unogamuchirwa.
Zvisizvo kuenda kumberi kamera
Kana iwe ukashandisa iyo yekumberi kamera kupfuura yekumashure kugadzira Instagram Nhau, iwe unogona kuseta pairi muzvirongwa kuitira kuti ivhure pane yekumberi kamera.
Rova zvakasimba kurudyi kuti uvhure Instagram Nhau> Dzvanya pazviruva cog mukona yekumusoro kuruboshwe> Chinja pane default kuenda kumberi kamera> Yaitwa.
Chinja yako toolbar yekamera kurudyi
Iyo khamera yekushandisa mukati meiyo Instgram Nhau inoonekwa kuruboshwe nekutadza, asi unogona kuichinja kurudyi.
Rova zvakasimba kurudyi kuti uvhure Instagram Nhau> Tinya pazvirongwa cog mukona yekuruboshwe kona> Sarudza kuruboshwe kana kurudyi kurudyi pasi pe'Kamera maturusi '.
Iwe unogona zvakare kukwenya museve wakapetwa kumusoro kwescreen yako kana bharanzi richiwedzerwa kuti uchinje pakati kuruboshwe kurudyi.
Instagram Nhau zvakavanzika matipi uye manomano
Aya ndiwo mamwe matipi uye madhiri ane chekuita nekuvanzika, sekuhwanda nyaya yako kubva kune vamwe vateveri kana kugadzira shamwari yepedyo rondedzero.
Maitiro ekugovana chete yako Instagram Nyaya neshamwari dzepedyo
Iwe unogona kuseta yepedyo shamwari rondedzero pa Instagram, iyo inozozove sarudzo kana iwe uchigovana yako Nyaya. Izvo zvakanaka kune nguva dzaungangoda kutumira chimwe chinhu asi usingade vateveri vako vese kuti vaone.
Rova zvakasimba kurudyi kuti uvhure Instagram Nhau> Tinya maseturu cog mukona yekumusoro kuruboshwe> Dzvanya paVhara Shamwari> Tanga> Wedzera shamwari dzaunoda kuwedzera nekutepa "Wedzera" padyo nezita ravo> Sarudza Gadzira Chinyorwa.
Kugovera yako Nyaya neshamwari dzepedyo chete, gadzira yako Instagram Nyaya, wobva wadzvanya pa 'Tumira ku' mukona yezasi yekurudyi uye tinya paVhara Shamwari.
Maitiro ekuvharira mumwe munhu kubva kuako Instagram Nyaya
Izvo zvinokwanisika kuviga kana kuvharira vamwe vanyowani kubva kukuona iwe Instagram Nyaya. Ivo havazowana kuziviswa kuti iwe wakavadzivirira, asi ivo vanogona kuzviziva. Kuvanza kuchavamisa kuti vaone ese mafoto uye mavhidhiyo aunotumira kuNyaya yako.
Rova zvakasimba kurudyi kuti uvhure Instagram Nhau> Tinya pazviruva cog mukona yekumusoro kuruboshwe> Tsvaga munhu kana vanhu vaunoda kuvharira> Tinya pazita ravo kuti uvasarudze (iyo tiketi ichaita bhuruu painosarudzwa)> Tapira 'Waita' pakona yepamusoro kurudyi.
Maitiro ekuudza kana mumwe munhu akakuvharira kubva kwavari Instagram Nyaya
Iwe unogona chete kuudza kana mumwe munhu akakuvharira kubva kune yavo Instagram Nyaya kana iwe waona ivo vaine Yakamisikidza nyaya pane yavo mbiri pamberi pavo vakuvharira. Kana iwe uchivharira mumwe munhu kubva kune yako Instagram Nyaya, iyo Chikamu Chakasimudzira chikamu chinobviswa futi saka kana iwe uchiziva kuti vane Nhau Dzakakura uye iwe usisakwanise kuvaona, iwe zvirinani uzive zvawakaita.
Sarudza uyo anogona kupindura uye kupindura kune yako Instagram Nyaya
Iwe unogona kusarudza kudzora mhinduro dzese uye maitiro kuako Instagram Nhau kudzima, pamwe nekungobvumira mhinduro uye maitiro kubva kune vateveri vako kana chete vateveri vaunoteera kumashure.
Rova zvakasimba kurudyi kuti uvhure Instagram Nhau> Tinya pazvirongwa cog mukona yekumusoro kuruboshwe> Sarudza 'Vateveri vako', 'Vateveri vanokutevera kumashure' kana 'Off' pasi peAtend mhinduro nemhinduro chikamu.
Maitiro ekugovana otomatiki yako Instagram Nyaya kune yako Facebook Nyaya
Unogona kuimisa kuitira kuti yako Instagram Nyaya igare ichigovana kune yako Facebook Nyaya, kunze kwekunge iwe ukasarudza neimwe nzira.
Rova zvakasimba kurudyi kuti uvhure Instagram Nhau> Tinya pazvirongwa cog iri kumusoro kuruboshwe kona> Toggle pa 'Govera nyaya yako kuFacebook'.
Ona mamwe edu matipi emazano e Instagram:
15 zvakavanzika Instagram matipi
Nzira Yokuwedzera Nayo Kutengesa Kwako Ne Instagram Stories